Isixhobo seFowuni yezixhobo | China Abavelisi bezixhobo ezifumaneka kwiChina kunye nabaxhasi
Imiphini ephindwe kabini yokuxuba iModeli SPM-P
Umxhubi we-TDW ongeyomxhuzulane ubizwa ngokuba ngumxube we-shaft paddle mixer, isetyenziswa kakhulu ekuxubeni i-powder kunye ne-powder, i-granule kunye ne-granule, i-granule kunye ne-powder kunye ne-liquid. Isetyenziselwa ukutya, imichiza, isibulala-zinambuzane, izinto zokondla kunye nebhetri njl.nzixhobo zokuxuba ezichanekileyo kwaye zilungelelanisa ukuxuba ubungakanani obahlukeneyo bezinto ezinomxhuzulane ohlukileyo, inani lefomula kunye nokufana kokuxubana. Inokuba ngumxube olungileyo kakhulu apho umlinganiselo ufikelela kwi-1: 1000 ~ 10000 okanye nangaphezulu. Lo matshini ungenza ukuba inxenye yegreyiti eyaphukileyo emva kokutyunyuzwa kwezixhobo zongezwa.
Horizontal Ribhoni Umxhubi Model SPM-R
Umxhubi weRibhoni oxwesileyo uqukethe itanki ye-U-Shape, spiral kunye neendawo zokuqhuba. Umoya isakhiwo ezimbini. Ukujikeleza kwangaphandle kwenza ukuba izinto zihambe zisuka emacaleni ziye embindini wetanki kunye nesixhobo esingaphakathi sokuhambisa izinto ukusuka embindini ukuya emacaleni ukufumana ukuxubana okuhambelana. Umxube wethu we-DP weRibhoni wokuxuba unokuxuba iintlobo ezininzi zezinto ngokukodwa kumgubo kunye negranular enentonga okanye umlinganiso wokudibana, okanye ukongeza ulwelo oluncinci kwaye uncamathisele izinto kumgubo kunye nezinto eziyimbumba. Iziphumo zomxube ziphezulu. Isigqubuthelo setanki sinokwenziwa sivulekele ukucoca kunye nokutshintsha indawo ngokulula.
Horizontal & Screw Screw feeder Umzekelo SP-HS2
Iscrew feeder isetyenziselwa ukuthuthwa kwezinto zomgubo, inokuxhotyiswa ngomatshini wokugcwalisa umgubo, iVFFS njl.
Umshini wesondlo uMatshini iZKS
Icandelo le-ZKS le-vacuum feeder lisebenzisa impompo yomoya ekhupha umoya. Ukungena kwempompo yokufunxa kunye nenkqubo yonke yenziwe ikwimeko yokutsala. Iinkozo zomgubo wezinto zifakwa kwitephu yezinto eziphathekayo kunye nomoya ojikelezayo kwaye zenziwe ukuba zibe ngumoya ohamba nezinto. Ukugqithisa ityhubhu yezinto zokufunxa, bafika kwi-hopper. Umoya kunye nezixhobo zahlulwe kuyo. Izinto ezahluliweyo zithunyelwa kwisixhobo sokufumana izinto. Iziko lolawulo lilawula "ukucima / ukucima" imeko ye-pneumatic valve kathathu yokondla okanye yokuhambisa izinto.
I-Screw ye-Screw Conveyor (ene-hopper) yeModeli SP-S2
Ukunikezelwa kwamandla: 3P AC208-415V 50 / 60Hz
Hopper Umthamo: Imigangatho 150L, ​​50 ~ 2000L inokuyilwa kwaye yenziwe.
Ukuhambisa ubude: I-0.8M esemgangathweni, i-0.4 ~ 6M inokuyilwa kwaye yenziwe.
Isakhiwo steel stainless ngokupheleleyo, iinxalenye zoqhagamshelwano SS304;
Enye into yokutshaja inokuyilwa kwaye yenziwe.